Dowladda Soomaaliya oo la wareegtay qalab casri ah oo si qalad ah looga soo dejiyay Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Soomaaliya oo la wareegtay qalab casri ah oo si qalad ah looga soo dejiyay Muqdisho
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay qalab casri ah oo loogu tallo-galay in lagu maamulo hawada Soomaaliya, kaas oo si qalad ah looga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Qalabkaasi oo markiisa hore loo waday xafiiska hay’adda caalamiga ah ee duullista hawada (ICAO) xarunteeda magaalada Nairobi ayaa waxay ku jiraan illaa seddax konteenaro, waxaana qalabkaasi loogu tala galay in lagula socdo dhaq-dhaqaaqa hawada Soomaaliya.
Hay’adda ICAO ayaa ka dalbatay dowladda federaalka Soomaaliya inay qalabkaasi kusoo wareejiso, balse dowladda Soomaaliya ayaa dalabkaasi ku gacan seyrtay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qalabkaasi uu yahay mid ay Soomaaliya leedahay.
Diidmada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa durbadiiba ka dhashay khilaaf soo kala galay dowladda Soomaaliya iyo hay’adda ICAO.
Hay’adda ICAO ayaa dooneysay in magaalada Nairobi ay ku rakibto qalabkaasi, si ay usii maamusho hawada Soomaaliya.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hore u dhistay xarun laga maamulo hawada Soomaaliya, taas oo illaa iyo haatan aanay cidna ku shaqeyn.
Shaqaale cusub oo loogu talogalay inay ku shaqeeyaan qalabkaan cusub ayaa haatan la diyaariyay, waxaana ay sugayaan oo kaliya amarka dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa hore ugu guuldareysatay inay la wareegto maamulka hawada dalka Soomaaliya, kadib burburkii dowladii dhexe ee militeriga ahayd oo dalka ka tallin jirtay.
Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay waxaa hawada Soomaaliya laga maamulayay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaas oo la sheegay in lacago adag looga qaadi jiray diyaaradaha dul mara hawada dalka Soomaaliya.